पेटभरी खान माग्दा मृत्यू किन ?
बैशाख २१, २०७८, १:१२ PM
मे १, अर्थात् १३२ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाई रहँदा सप्तरी राजगढ गाउँपालिका ५, मलेकपुरका ४५ वर्षीय मजदुर बुधु सदाको मृत्यु भयो । कारण थियो, बुधुले आफ्नो ठेकेदारसँग पेटभरी खान माग्दा उनलाई हातखुट्टा बाँधेर निर्घात रुपमा कुटपिट गरेका थिए । बेहोस अवस्थामा रहेका बुधुलाई तीन दिनपछि ठेकेदारले उनको परिवारलाई भारतीय सिमानामा बोलाएर जिम्मा लगाएका थिए । संयोग कस्तो मिल्यो भने उपचारकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसकै दिन उनको देहावसान हुन पुग्यो ।
बुधु हप्ता अगाडि ठेकेदारसँग भारतको जमुनानगरस्थित प्लाइउड फैक्ट्रीमा मजदुरी गर्न पुगेका थिए । दिनभर काठको भारी बोक्नुपर्थ्यो । खाना खानेबेला भने जहिलेपनि निस्तै नुनभात खाएर रात विताउनुपर्थ्यो । तर, त्यो निस्तै नुनभात पनि कहिले पेटभरी खान पाउँदैन्थ्यो । कहिले खाना सकेको हुन्थ्यो भने कहिले भाँडामा थोरै खाना हुन्थ्यो । बुधु नयाँ मजदुर थिए । भोकको कुरा त हो, कति दिन सहुन् । एकदिन ठेकेदारसँग उनको झगडा हुन पुग्छ । ठेकेदार सहित चारजना मिलेर बुधुलाई हातखुट्टा बाँधेर निर्घात रुपमा कुटपिट गर्छन् । बुधु बेहोस हुन्छ ।
यतिबेला बुधुको घटनाले सबैलाई मर्मत तुल्याएको छ । बुधु एक मजदुर मात्र थिएन । तराई मधेसका एउटा सिमान्त परिवारमा जन्मे हुर्केका मानिस पनि थिए । जसको इतिहास नै आदिम कालदेखि मजदुरी जीवनबाट ओतप्रोत थिए । जो एक दिन मजदुरी गर्न नपाउँदा परिवार नै भोकमा डुब्थ्यो । बुधु र बुधुको परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको भुतभोगी थिए । त्यसैले उनी आफ्नो मजदुरीलाई धेरै माया गर्थे । मायासँगै आफ्नो मजदुरी र मजदुरीसँगै आफ्नो जीवनलाई बचाएका थिए । तर, आखिर त्यही मजदुरीको कारण उसको ठेकेदारले ज्यान लियो ।
मुलुकमा दोस्रो चरणको कोरोना कहरको सुरुवात भएको छ । यस्तैबेला अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसकै दिन पर्यो । सोही दिन यसरी एउटा अथक मजदुरको अवसान भयो । कारण जेसुकै होस्, यो पेटकै खातिर संसारमा मान्छे अनेक कर्म गर्छन् । सोही कर्म मध्ये एक कर्मको साक्षी बुधु सदा थिए । तर, आज बुधुसँगै उसको कर्मको पनि अवसान भएको छ । यो भन्दा दुर्भाग्यको विषय के हुन सक्छ रु बुधु सदाको मृत्यु एक उदाहरण मात्र हो । दिनमा यस्ता कैयन मजदुरहरूले अनाहकमा भोकभोकै ज्यान गुमाई रहेका हुन्छन् । उनका परिवारजन भोकले छटपटाई रहेका हुन्छन् । जसले आफ्नो कडा मेहनतबाट देश र आफ्नो परिवार पालेको हुन्छ । ती वर्ग नै यसरी भोकभोकै मृत्युवर्ण गर्नुपर्दाको पीडा कति होलान् । एउटा मजदुरले आफ्नो राज्य कर्म निर्वाह गरिरहँदा राज्यले पनि आफ्नो कर्म र दायित्वबाट किन पन्छि हटिरहेका छन् । यो विषय कुन शासक र सरकारले बुझ्ने हो । अनि कुन राजनीतिक दलले अनुसरण गर्ने हो ?
पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा जसरी मुलुक दलित हत्याको हटस्पट बन्यो, त्यसरी नै यतिबेला दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको सुरुवातमै फेरि दलित मजदुरको हत्याको सुरुवात भएको छ । यो सबैभन्दा दुखद दिनको सुरुवात भएको छ । अहिले पनि एउटा मान्छे अर्को मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्ने दिने स्थिति समाजमा छैन् । यसरी दुई वर्गीय र दुई ध्रुवीय रुपमा बाँडेको समाजलाई कसरी समतामूलक समाजको रुपमा फेर्ने हो भने कुरा यतिबेला यसखाले घटनाहरुले चुनौती थपिरहेका छन् । कोभिड १९ मा मजदुर कोरोनाले भन्दा भोकले ज्यान गुमाई रहेका छन् । अनि दिनदहाडै पशुझै मारिरहेका छन् । यो समाज कस्तो समाज हो रु यो कसको समाज हो रु जहाँ मानव सम्बेदना छैन् । इतिहास साक्षी छ, मजदुर वर्ग थुप्रै रोग, भोक र महामारी पचाउने वर्ग हो । चाहे त्यो अभावले हो वा मजबुरीले होस् । तर, मजदुर वर्गको जीवनमा ठूलो चुनौती आदिमकालदेखि नै छ ।
मानव समाजको उत्पत्ति कालदेखि श्रमिक र श्रम बीच नंग र मासुको सम्बन्ध छ । जसरी नंग मासु एक अर्का बिना बाँच्न सक्दैन । अर्थात् कल्पना गर्न सक्दैन त्यसरी नै श्रम र मानव जीवन एक अर्का बिना बाच्न सक्दैन, कल्पना गर्न सक्दैन । तर, अहिलेसम्म यो मानवसमाज यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो सम्बन्धको बोध कति प्रतिशतले गरेकाछन् ? प्रश्न र परिस्थिति यहा आएर गम्भीर हुन पुगेको छ । जहाँ मान्छेको जीवन अडेको छ, त्यो कुराको बोध किन मनुष्यले स्वयं गर्न सकिरहेको छैन् ? यसरी बुधुहरु कहिलेसम्म भोककै कारण प्रताडित भएर मारिनुपर्ने हो ? हामी मानवले एउटा मानवको कुरा बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ? के बुधु सदाको परिवारले न्याय पाउँला ? यसरी थप बुधुहरुको हत्याको अन्त्य होला ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
यो समाजमा मान्छे कति निर्दयी छन् कि आफ्नो स्वार्थको खातिर अरुको सामूहिक स्वार्थको समेत निर्मम तरिकाले हत्या गर्छन् । र, आफ्नो जीवनसँग खुशी साट्छन् । अरुको जीवनलाई विनाश पार्छ । समाजमा जडा गाडेर बसेका पुरातन धर्म, संस्कार र संस्कृत मानव समाजको विकास र सम्मानको यति ठूलो बाधक शक्तिको रुपमा खडा छन् कि यसलाई परिवर्तन गर्न कति पुस्ता लाग्छ त्यो अनुमान समेत लगाउन गार्‍हो छ । यसर्थ हामी सबै भुईं सतहका मान्छे सतर्क र सचेत हुनैपर्छ । र, यसखाले मानव अपराधका घटनाहरूको निशेध गर्नैपर्छ । किनभने युग बदलिएको छ । समय र परिस्थिति फेरिएको छ । हामी पनि फेरिनुपर्छ । हामीसँगै समाजलाई पनि फेरिनुपर्छ । बुधुहरुको सपनाहरु जोगाउनुपर्छ । किनभने बुधु अब एउटा समाजको विचार हुन पुगेको छ ।
Tags: Budhu SadaRajesh Bidrohiराजेश विद्रोही
जनकपुरका अस्पतालले भर्ना नलिदा कोरोना शंकास्पद विरामीको ज्यान गयो
माधव नेपाल पक्षका २१ सांसद राजीनामा दिने तयारीमा
माटोको ढिस्कोले पुरिएर एक बालिकाको मृत्यु, पाँच घाइते
23 mins पहिले
नेपालमा बलिउड फिल्म ‘उचाइ’को सुटिङ हुँदै, अनुपमले गरे नेपाली पाइलटको प्रशंसा
52 mins पहिले
नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री शाक्यले दिइन् राजीनामा
इन्डोनेसियाकी पूर्वराष्ट्रपति सुकार्नोकी छोरी हिन्दू बनिन्
चीनमा फेरी फैलिदै कोरोना: राजधानीमै लकडाउन
मलेसिया खुल्यो : अब नेपाली मजदुर जान पाउने